कुमार बस्नेतहरुलाई पनि समाउने कि सरकार ? – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
कुमार बस्नेतहरुलाई पनि समाउने कि सरकार ?
By डिजिटल खबर Last updated Oct 26, 2019 54 0
९ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले तीन दिनमा दुई कलाकार पक्राउ गर्‍यो । मंगलबार दुर्गेश थापा र बिहीबार र्‍यापर भिटेन । उनीहरुमाथि सरकारको अभियोग थियो- संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको । अश्लील गीत गाएको ।
दुर्गेशले तिहार गीत सार्वजनिक गरेको तीन महिनापछि सरकारलाई लाग्यो- यसले बितायो !
भिटेनले ७ जून २०१९ मै युट्युवमा गीत राखेका थिए- हामी यस्तै त हो नि ब्रो ! यो गीत एक करोड ९० लाख पटक हेरिसकिएको थियो । बिहीबार मात्र सरकारलाई लाग्यो- भिटेनका शब्दले त समाजलाई बित्यासै पार्‍यो ।
र्‍यापर भिटेनमाथि अश्लीलता फैलाएको मुद्दा लगाएर प्रहरीले हिरासतमा कोच्यो । सामाजिक सदभाव खल्बलाउने निर्क्यौल गर्‍यो र भिटेनलाई पक्राउ गर्‍यो । भलै उनी तारेख धाउने गरी शुक्रबार छुटेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस रिहा भए र्‍यापर भिटेन
भिटेन पक्राउँसँगै सिर्जनामाथिको बहसको आयतन बढ्दै गएको छ । एकथरीले भनेका छन्, शासकले सिर्जनाको ठेक्का लिने होइन । अर्कोथरीले भनेका छन्, समाजमा अश्लीलता फैलाउने जो कोहीलाई यसैगरी कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ लगाउनुपर्छ, सरकारले राम्रो काम गरेको छ ।
प्रगतिशील साहित्यकार आहुतीको ट्वीट छ- भिटेनलाई मुद्दाको दुस्साहस या कलाकार दुर्गेश थापामाथिको अपमान- कला सिर्जना र कलाको कालसापेक्षताको छेउटुप्पो नबुझेका आदिम मानसिकताका शासकहरुको आत्मरतिमय प्रहसन मात्र हो । तिनीहरु अन्ततः हास्य पात्र बन्नेछन् । न्यायप्रेमीलाई निद्रा तोड्न यस काण्डले साउती भने गरेकै छ !
मार्क्सवादी साहित्यकार आहुतीमाथि अर्का साहित्यकार पूर्ण इन्फादा यस्तो प्रश्न तेर्स्याउँछन्- ‘दाइ त मार्क्सवाद बुझेको र त्यसैमा विश्वास गर्ने मात्र होइन व्याख्याता र ज्ञाता भनेर कहलिएको मान्छे । सामाजिक विकृति र अश्लील कुरा त मार्क्सवादले स्वीकार्दैन जस्तो लाग्थ्यो । कि नव मार्क्सवादले यस्तो विकृतिलाई पनि स्वीकार गर्छ दाइ ?’
आहुतीमाथि पूर्ण इन्फादाको थप प्रश्न छ, ‘तपाईँका परिवार र सन्तानलाई दुर्गेश र भिटेनका गीत सुन्न र हेर्न प्रोत्साहित गर्न सक्नुहुन्छ ? नत्र विरोधका लागि विरोधको संस्कृति त्याग्नुहोस् । विरोध गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ चुँसम्म गरेको सुनिँदैन त दाइ ? कतै एनजीओ र आईएनजीओको प्रभाव देखिन थालेको त होइन नि हजुरमा ?’
पशुपति शर्माको गीतमा प्रतिबन्ध लगाउनु अनि दुर्गेश र भिटेनहरुलाई समाउनु ठीक हो कि छैन भन्ने बहस आफ्नै ठाउँमा छ । तर, त्यस्ता गीतमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्नु ठीकै हो भनेर मान्ने हो भने अरु पनि अश्लील र सामाजिक सदभावविरोधी गीतहरु छन्, जसलाई सरकारले अहिलेसम्म छुट दिँदै आएको छ । के यी सबै गीतमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ ?
कस्ता गीत गाउने भन्नेबारे सरकारले खटन-पटन गर्ने हो भने अरु पनि त्यस्ता गीत र गायकहरु छन्, जसले समाजमा मनपरी ढंगले गीत गाइरहेका छन् ।
उदाहरणका लागि हेरौं त्यस्ता गीतहरु-
गोजीमा गाँठ भाको… पोइल जान पाम् !
सत्तासीन दलबाट राष्ट्रियसभा सदस्य कोमल वलीले तीजको पवित्र संस्कृतिलाई बिटुलो बनाउँदै भनेकी छिन्-
पोइला जान पाम
पोइला जान पाम ।
लाली जोवन सुम्पिएर आफै अघि सर्दा
मै सम्हाल्छु भन्ने एउटा निक्लिएन मर्द
मनमा आँट भाको, गोजीमा गाँठ भाको
यत्तिको मर्द भेटिएन कोई…
शीरमा लाउने शीरै फूल हातमा लाउने बाला
राम्रा केटा कोही छौ भने यो जोवन सम्हाल
कोमल वलीले तीजजस्तो हिन्दुको पवित्र पर्वमा डिस्कोमा नाचौँ भनेकी छिन् । डिस्कोमा पक्कै पनि दूध खाने प्रचलन छैन होला, रक्सी नै खाएर नाचिन्छ होला । के अब संस्कृतिको जगेर्नाका लागि गायकहरुलाई समाउँदै युट्युबबाट गीतहरु हटाउने हो भने गायिका एवं सांसदको तक्मा भिरेकी कोमल वलीको गीत युट्युबमा राखिरहन मिल्ला त सरकार ?
कुमार बस्नेतलाई के गर्ने ?
लोक गायक कुमार बस्नेत भिटेन भन्दा कम्ता छैनन् । कुमार बस्नेतले भिटेनलेभन्दा कडा दिएका छन् । भिटेनलाई समात्ने हो भने बस्नेतलाई त झन् छोड्नै मिल्दैन ।
के यो सरकारले कुमार बस्नेतका गीतहरु सुनेको छैन र ?
कलियुगको बेलैमा जोसमा हुन्न होस्
उनकै छोरी तरुनी हामीलाई केको दोष
नहेरौं नि हेरौं लाग्ने उनको लाली जोबन
राम्री केटी देख्दाखेरि नहेर्ने चैं को छन् ?
आमा चाहिँले आफ्नी छोरी सधैं सानी ठान्छिन्
छोरी भने जर्सी गाईको बाछी जस्ती भा’छिन् ।
जसले सक्छ उसले खान्छ बजारको काउली…
पल्लोघरे ठूले झ्यालढोका थुन्
आजकालका ठिटा उत्ताउला हुन्
धुरीमा चढेर कराउलान्
दिउसै छोरी हराउलान्
लैबरी लै लैबरी लै लै लै…
डल्ली मगर्नी हो सुन मयाँ
बोल्न मन लाग्दैन हो पीर पर्‍यासी
ख्याल ख्यालमै दिल बस्यो कान्छी सालीमा
अहिले बद्री पंगेनी लोक दोहरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष छन् । उनका गीतले पनि समाजलाई पक्कै विकृत बनाएको हुनुपर्छ । उनले ‘ससुरालीमा’ बोलको गीत सार्वजनिक गरेको दशक बढी भयो । त्यही गीतबाट बद्री पंगेनी र सिन्धु मल्ल नेपाली सांगीतिक आकाशमा स्थापित भएका थिए । तर, उनको गीतले त यस्तो पो भन्छ-
ससुराली गैरहन्थेँ दिनका दिन
साली माग्दा सासूले लखेटिन्
घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै साली माग्ने गीत गाउने बद्री पंगेनीलाई चाँहि पक्राउ नगर्ने सरकार ? कानुनले एकभन्दा बढी बिहे गर्न नपाउने भनेको छ ।
ईश्वरलाई तँ भन्ने नारायण गोपालका गीत के गर्ने ?
स्वर्गीय नारायण गोपालको गीतमा पनि सेन्सर लगाउने हो कि ? नारायण गोपालले आफ्ना गीतहरुमा मदिरा सेवनलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । ईश्वरलाई नै तँ भनेर सम्बोधन गरेका छन् ।
रहरै रहरमा पिएँ,
विवश भएर पिएँ
दुःखमा पिए, सुखमा पिएँ
पिउँदिन पिउँदैन भन्दै पिएँ
आजभोलि जिन्दगानी छोटि्टन थालेछ …
ईश्वर तैंले रचेर फेरि कसरी बिगारिस् ?
सृष्टिको फूल रोपेर तेस्तो कसरी लतारीस् ?
स्वर्गीय बुद्धिकृष्ण लामिछानेको ‘तिम्रो र मेरो मायाको डोरी बेरौं कि फनफनी’ गीतलाई पनि सेन्सर गर्नु पर्ला कि सरकार ! त्यस्तै विधान श्रेष्ठलाई पनि नपक्रिने पनि कुनै कारण छैन । वहुविवाहलाई नै यसरी ठट्टा गरेका छन् :
पालुङटारको गोरुले सल्यान टारको बीउ खायो
कान्छी ल्याउँदा जेठी जिल खायो…
धर्मेन्द्र सेवानको गीतले त अझै समाजमा विग्रह नै ल्यायो होला । उनले गीतको अन्तरामा भनेका छन्
‘आफ्नो पोइलाई बासी मकै
नाठो पोइलाई रोटी…।’
सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटा ज्यू, ‘के यी गीत परिवारसँगै बसेर हेर्न सकिन्छ र ?
हेर्नुस् त प्रकाश सपुत र पि्रति आलेको ब्याटल- टू कस्तो छ :
प्रकाश : फेसन हेर्दा फुच्ची केटी, उमेरले चाहिँ आन्टी ।
आज सबले बजाउने हो, भेट भो साझा घण्टी
आयो तेरो सर…
प्रिति : सम्झिँदा नि लाग्छ राजै ए भूपू स्वामी राजै
हली राम्रो नहुनाले गैरी खेत त बाँझै
आयो तेरो मिस…
प्रकाश : थाहा छ मलाई मेरो हो कि तेरो थियो कारण
लाखौं कोसिस गर्दा पनि छैन गर्भधारण
प्रिति : न त दिनमा घर बस्थ्यो, न त राति जाग्थ्यो
छर्नेले बिउ नछरेसी फल कसरी लाग्थ्यो ?
नयाँ पुस्ताका पुस्ताका भिटेन, प्रकाशदेखि मेलवादेवीसम्मले समाज बिगार्ने गीत गाएका छन् भनेर समाउने हो भने राम थापाको ‘ठोक न मादल ठोक’देखि ‘कति बस्छौ माइतीकै कौसीमा’ सम्मलाई सेन्सर लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
कविता गजल उस्तै छन्, स्ट्यान्डअप कमेडी… । के अब सरकारले यी सबको मुखमा बुझो लगाउने ? जसरी पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’लाई हटाइएको थियो, त्यसरी नै ठेगान लगाउने कि ? जीवन शर्माको गीतलाई फेरि किन बज्न दिने ? उनलाई पनि जेल हाल्ने कि ? उनले त ‘देशै जान थाल्यो टुक्रा-टुक्रा गरेर…’ भन्दै संघीयताविरोधी गीत गाएका छन् ।
हुँदाहुँदा नेकपा डबलकाे हैकममा अब सुन्दर र कुरूप एवं श्लील र अश्लील कला छुट्याउने,कलाकारलाई पक्रिने र दण्ड दिने पनि पुलिस? पशुपति शर्मापछि दुर्गेश थापा र भिटेनलाई सिकार तुल्याए त पुलिस सरले! गाँठ्ठे,अाेली राज त पुलिस राजकाे पर्याय पाे हाे कि! यसै भन्दैछन् त गाेकुल धूप!8006:09 AM – Oct 25, 2019Twitter Ads info and privacy165 people are talking about this
देशमा गणतन्त्र आइसक्दा, दुई तिहाइ कम्युनिष्टको सरकार हुँदा पनि ‘अझै नि निरंकुश शासन ढल्या छैन है’ भन्ने बद्री पंगेनीको गीतलाई किन सेन्सर नलगाउने ?
अब रामेश-रायनहरुको गीतमा पनि अंकुश लगाउनुपर्छ सरकार ! समाज भत्काउनेहरुलाई कारवाही गरेर सभ्य समाजको निर्माण गर्ने सरकारको महान सुरुवातको विरुद्धमा यस्तो लेख्नेलाई फेरि के गर्ने ? आभाले यसरी ट्वीट गरेकी छिन् :
‘नाङ्लो ठट्याएर हात्ती तर्साउने सरकारको षड्यन्त्र बुझिनसक्नुको छ । भिटेन र दुर्गेशहरुको चिन्ता नगर अब हरेकले आफ्नो चिन्ता गर । ए गीत गाउनेहरु, कलम चलाउनेहरु, अभिनय गर्नेहरु, समाचार छाप्नेहरु, हरेक सृजनामा तल्लिन एक-एकहरु कतै यो निरंकुशता तिमीहरुलाई होसियार त भनिरहेको छैन ?’
खगेन्द्र संग्रौला अझ बढी मच्चिएका छन्, ‘हुँदाहुँदा नेकपा डबलको हैकममा अब सुन्दर र कुरुप एवं श्लील र अश्लील कला छुट्याउने, कलाकारलाई पक्रिने र दण्ड दिने पनि पुलिस ? पशुपति शर्मापछि दुर्गेश थापा र भिटेनलाई सिकार तुल्याए त पुलिस सरले ! गाँठ्ठे ओली राज त पुलिस राजको पर्याय पो हो कि ! यसै भन्दैछन् त गोकुल धुप !’
राष्ट्रिय मानवअधिकार अयोगकी एक सदस्यले समेत उस्तै प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । उनको ट्वीट छ, ‘गीत पनि सोधेर गाउनुपर्ने गायकले, लेखक वा रचनाकारहरुले अनुमति लिएर लेख्नुपर्ने । कसैलाई चित्त बुझ्दैन भने नसुने हुन्छ । तर, र्‍याप-र्‍याप नै हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मजाकै भयो ।’
फेरि गायक तथा संगीतकार कालिप्रसाद बास्कोटाले किन यस्तो ट्वीट गरे होलान्, ‘डियर गभरमेन्ट ! देअर इज हियुज डिफरेन्स विट्वीन रेपर एण्ड र्‍यापर । प्लिज चेन्ज योर प्रायोरिटी । फ्री भिटेन ।’
अब तारादेवीका यस्ता गीतलाई बरु खुब प्रमोट गर्ने पो हो कि ?
तिम्रा पाउहरुमा म सधैं झुकिरहन्छु
तिमी उठाइरहुँ माया र आशिष थपिरहु
तिमी भरिरहुँ सिउँदो, म नुहिरहन्छु…।
Digital KhabarKumar BasnetMusicNepalSinger
स्वदेशी विजुलीबाट देशभर तिहार उज्यालो बनाउँदै प्राधिकरण
नयाँ पत्रिकाकै ‘साहु’ जग्गा किन्दा ठगिए
न्युज लाइन्स मिडियाको आफ्नो ४ औ वार्षिकोत्सव तथा सम्मान…
बिग ब्यास लिगमा सन्दिपक २ विकेट
आज नेप्से ५० अंकले उकालो लाग्यो
स्वस्थानी व्रतकथा बिहीबारदेखि सुरु
बलात्कार गर्ने ट्राफिक प्रहरी पक्राउ
११ माघ २०७७, आईतवार २१:२५
११ माघ २०७७, आईतवार १९:५६
११ माघ २०७७, आईतवार १८:३३